Hubinta Ammaanka Bogagga
Sida loo isticmaalo kordhinta
Ku rakib fidinta Chrome
➥ Tag URL ⤓ Download
URL kan waa mid badbaado leh!
Fiiri URL kale
Qalabaynta iyo Qalabka Farsamada.
Qalabkan nabadgelyo ee loo dhisay si loo aqoonsado boggaga internetka ee nabadgelyada ah ee shabakada internetka oo ku ogeysiiyay dadka isticmaala waxyeelada iman karta Waxaan rajeyneynaa inaan ku dhiirrigelinno horumarka dhinaca websaydh amaan ah oo amaan ah.
Websaydhadaan waxaa ku jira nambar kaas oo ku rakibaya software xaasidnimo ah kombiyuutarada booqashada, ama marka uu isticmaalayo waxay u maleynayaan in ay soo dejinayaan software sharci ah ama aan aqoonta isticmaale. Hackers ayaa markaa isticmaali kara barnaamijkan si ay u qabsadaan oo u gudbiyaan dadka isticmaala macluumaadka gaarka ah ama xasaasiga ah. Tiknooloojiyada Browsing Safe ayaa sidoo kale baaraya oo falanqeeya webka si loo aqoonsado boggaga internetka ee khatarta badan leh.
Xayeysiiska ayaa sharraxay
Websaydhadaan waxay iska dhigaan inay sharci noqdaan si ay u isticmaali karaan isticmalayaasha si ay ugu qoraan macaamiishooda iyo lambarkooda iyo inay wadaagaan macluumaad kale oo khaas ah. Bogagga shabakadda ee qeexaya bogagga internetka ee sharci-dejinta ama dukaamada internetka ayaa ah tusaalooyin caadi ah oo ah goobaha phishing.
Sida aan u aqoonsanno xaasidnimo
Ereyga loo yaqaan malware wuxuu daboolayaa noocyo badan oo software xumo ah oo loogu talagalay inuu waxyeelo u keeno. Meelaha cudurka qaba waxay ku dhejin karaan mashiinka user si ay u xadaan macluumaadka gaarka loo leeyahay ama ay koontaroolaan mishiinka isticmaalaha iyo weeraraan kombiyuutarada kale. Mararka qaar isticmaalayaashu waxay soo qaadaan khayaanadaas sababtoo ah waxay u maleynayaan inay ku xiranyihiin software ammaan ah aynaan ka warqabin dhaqanka xun. Mararka kale, nacasku waa la soo dejiyey iyada oo aan la aqoon. Noocyada caadiga ah ee nacabka waxaa ka mid ah ransomware, spyware, fayrusyada, Gooryaanka, iyo fardo qallooca.
Cudurradu waxay ku dhuuman kartaa meelo badan, wayna adkaan kartaa xitaa khubarada si loo ogaado haddii boggooda internetka ay qaadsiiyaan. Si aad u heshid boggaga la jabsaday, waxaan ku sawirnaa shabakada oo waxaan isticmaalnaa mashiinada farsamada si aan u falanqeyno goobaha aan helnay calaamado muujinaya in goobta la jabsaday.
Kuwani waa bogagga shabakadaha ee khawano-bixiyeyaashu ay si qarsoodi ah u martigeliyaan oo ay u qaybiyaan software-ka xun. Meelahani waxay si toos ah uga faa'iideysanayaan biraawsarka ama waxay ku jiraan barnaamijyo waxyeelo leh oo inta badan soo bandhigaya dabeecadaha xun. Tiknoolajiyadeena waxay awood u leedahay inay ogaato dabeecadahan si ay u soocaan boggaani sida goobaha weerarka.
Meelaha la soo koobay
Kuwani waa websiyo sharci ah oo la jabsaday si loogu daro content, ama si toos ah dadka isticmaala, goobaha laga yaabo inay ka faa'iidaystaan ​​dookhooda. Tusaale ahaan, bog ka mid ah bogga ayaa laga yaabaa in la dhibaateeyo si loogu daro koodhka isticmaalaya isticmaalaha goobta weerarka.
Ku saabsan TOS Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah Nala soo xiriir Sitemap Facebook